PressReader - Isolezwe: 2017-11-13 - Umphenyi uphikise isicelo ‘samazimu’
Umphenyi uphikise isicelo ‘samazimu’
Isolezwe - 2017-11-13 - IZINDABA - NONTUTHUKO NGUBANE
UMPHENYI wecala labasolwa ngokudla abantu uncenge inkantolo ukuba ingalinge ibadedele ngebheyili abasolwa ngoba bayingozi emphakathini futhi bazobaleka uma bededelwa.
UWarrant Officer Kgatatso Matsena ubefakaza ngoLwesihlanu enkantolo yeMantshi eMtshezi lapho ebephikisa khona ukuthi oMnuz Nino Mbatha, Sithembiso Sithole, Lungisani Magubane noKhayelihle Lamula banikwe ibheyili.
Laba babhekene necala lokubulala nelokukhanda uzungu lokubulala.
Umphenyi uthe abasolwa bayingozi enkulu njengoba umufi kulesi sigameko wabulawa ngesihluku esimangalisayo, wakhishwa konke okungaphakathi, wasikwa izingalo nemilenze, washiywa eyigobolondo.
Ngaphezu kwalokho umphenyi uthe isidumbu sikamufi sahlukaniswa phakathi, uMbatha noSithole bahlukaniselana izicubu zaso ngokulingana.
“Abasolwa bayazi ukuthi leli cala ababhekene nalo linzima kakhulu. Uma inkantolo ibadedela ngebheyili ngeke baphinde babuyele enkantolo. Sinecala eliqinile nobufakazi obuningi njengoba ezinye izicubu zomzimba zatholwa kwabanye abasolwa,” kusho uMatsena. UMshushisi, uMnuz Israel Zuma, ubuze umphenyi ukuthi ngabe lezi zicubu sekutholakele yini ukuthi ngezobani. Umphenyi uthe izicubu zisahlolwa ePitoli, wathi akukaphothulwa ukuhlolwa kwazo okwenza bangazi ukuthi ngezomuntu oyedwa noma abaningi yini.
Abameli babasolwa, uMnuz Sizathu Ngcobo noNksz Thandeka Hadebe bathe abagculisekile ngokuthi umbuso unecala eliqinile elibhekene nabasolwa ngoba kulokhu kuvela ukuthi abasolwa babhala izitatimende ezifungelwe ngabakwenza. Bathi lezo zitatimende zizophikiswa.
Abameli bacele ukuba umphenyi aveze ukuthi yibuphi ubufakazi abanabo bokuthi abasolwa bayingozi futhi icala lizobagojela.
Umphenyi ushaye phansi ngonyawo wathi ukudalula ulwazi kuzobulala icala lakhe.
Ikhansela laseSigodlweni le-IFP, uMnuz Mzwandile Majola nalo lifakazile kuleli cala liphikisa ukuthi abasolwa banikwe ibheyili. Lithe umphakathi udiniwe ngalesi sigameko futhi awuzizwa uphephile ngenxa yento eyenzeka.
Uthe uma bededelwa abasolwa kungenzeka umphakathi uziphindiselele, ubalimaze.
Abanye abasolwa abathathu ababeboshelwe leli cala oMnuz Lindokuhle Masondo, Nhlakanipho Madlala noSasinu Ndlovu badedelwa yinkantolo.
UMagubane ngesikhathi ezicelela ibheyili uthe uma ededelwa uzoya ebandleni lakwaShembe eyocela ukuba icala lisulwe. Uthe uyazi uyokwamukelwa ngezandla ezimhlophe emphakathini uma ededelwa ngoba bayazi ukuthi umsulwa.
IMantshi uNkk Arthi Sukraj, ulihlehlisele uNovemba 21 icala ukuze umphenyi akwazi ukuqinisekisa ikheli lendawo okuzohlala kuyo uMagubane uma ededelwa, kuqhubeke nesicelo sebheyili.
Isithombe: NONTUTHUKO NGUBANE
ABASOLWA ecaleni elithinta ukudliwa kwabantu. UMnuz Nino Mbatha, ngakwesokudla, oyinyanga uyena kuphela ongasifakanga isicelo sokudedelwa ngebheyili